WARBIXIN: Jose Mourinho Oo Diyaar U Ah In Paul Pogba, Anthony Martial Iyo Xidigo Kale Uu Ka Diro Man United Iyo Faah Faahinta Wax Walba Oo Pogba & Mourinho Soo Kala Maray. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Jose Mourinho Oo Diyaar U Ah In Paul Pogba, Anthony Martial Iyo Xidigo Kale Uu Ka Diro Man United Iyo Faah Faahinta Wax Walba Oo Pogba & Mourinho Soo Kala Maray.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa ilaa hadda raadinaya qaabkii uu Red Devils ugu soo celin lahaa doorkii guulaha isaga oo wali ku dhibtoonaya in uu ku hogaamiyo koobabkii waa waynaa ee laga doonayay in uu Old Trafford keeno. Macalinka ree Portugal ayaa diyaar u ah in uu isbadalo waa wayn kooxdiisa ka sameeyo si uu hamigiisa Old Trafford u gaadhi karo.
Mourinho ayaa labadii xili ciyaareed uu Man United joogay arkayay iyada oo Chelsea iyo Man City ku kala guulaysteen koobka Premier league taas oo wali muujinaysa in aanu helin qaacidadii guusha Red Devils laakiin waxa uu wali ku dhibtoonayaa sidii uu Man United heer fiican uga gaadhsiin lahaa tartanka kooxhaa Yurub ee UEFA Champions League.
Wargayska Daily Mail ayaa soo bandhigay sida uu Jose Mourinho diyaarka ugu yahay in uu xidigo muhiim ah ka fasaxo kooxdiisa kuwaas oo aanu ka helin adeegii uu ka doonayay waxaana liiska ciyaartoyda isbadalada waa wayn ee uu samayn doono hogaaminaya xidiga ay sida wayn isku khilaafsan yihiin ee Paul Pogba.
Sida lagu daabacay wargayska Daily Mail, Jose Mourinho ayaa diyaar u ah in Paul Pogba uu lacag qaali ah ku iibiyo isla markaana uu xidiga kale ee ay isku xulka qaranka France yihiin ee Anthony Martial uu u ogolaado in uu Man United ka baxo isaga oo Mourinho lacagtan u adeegsan kara maalgalin cusub oo uu xidigo kale kula soo wareegi karo.
Waxaa laga joogaa 11 maalmood markii uu Pep Guardiola si lama filaan ah saxaafada uga horsheegay in suuqii bishii January uu wakiilka Paul Pogba ee Mino Raiola uu kooxdiisa Man City u soo bandhigay saxiixa Pogba iyo Mkhitaryan taas oo muujisay sida mustaqbalka Pogba uu u sii xumaaday.
Hadda waxa uu shakiga ugu wayni ka jiraa haddii Mourinho uu kulanka Bournemouth shaxdiisa ku soo bilaabi doono Pogba balse waxa ugu wayn ayaa ah haddii xidiga ree France uu ciyaari doono kulanka lagu tilmaamay kulanka xili ciyaareedkan ugu wayn Man United ee ay afar dhamaadka FA Cupka kula ciyaari doonto Tottenham.
Xaaladihii Xumaa Ee Mustaqbalka Paul Pogba Soo Maray Iyo Sidii Ay Markiiba Wax Isku Badaleen:
Jan 31,2018: Mourinho ayaa Pogba ciyaarta ka soo saartay daqiiqadii 63 aad ee kulankii Tottenham ay guuldarada kala soo laabtay wuxuuna Mourinho yidhi: ” Isagu si adag ayuu u shaqeeyay laakiin kulanku muu ahayn midkiisii”.
Feb 3,2018: Kadib kulankii xigay ee Huddersfield Mourinho ayaa kaydka dhigay Pogba wuxuuna kadib iska diiday in ay ciqaab ahayd wuxuuna yidhi: “Ujeedadu may ahayn in qofna la ciqaabo”.
Feb 11,2018: Markale Pogba ayaa daqiiqadii 66 aad badal looga saaray kulankii Newcastle United wuxuuna Mourinho sheegay: “Hab ka fiican ayaan khadka dhexe ka doonayay kulan koox si kala danbaysa u difaacanaysa”
Feb 16,2018: Mourinho ayaa been ku tilmaamay wararka sheegayay in Pogba uu xagaaga baxayo wuxuuna ku jawaabay markii wax laga waydiiyay mustaqbalka Pogba :”Waa beeno”.
Feb 17,2018: Mourinho oo si wayn ugu duur xulaya Pogba ayaa si wayn u amaanay da’yarka Scott McTominay taas oo xaalada uga sii dartay wuxuuna yidhi: ” Isagu(Scott McTominay) waxa uu leeyahay timo xiirasho caadi ah, wax shaabado ah ma laha, gawaadhi waa wayn ma laha, saacado waa wayn ma haysto, waa wiil yar oo isdhul dhiga”.
Feb 21,2018: Mourinho ayaa shaxdiisii kulankii Sevilla ee Spain ku soo bilaabay Scott McTominay isaga oo kaydka dhigay Pual Pogba kulan sidan u wayn laakiin markii uu Herrera dhaawacmay ayuu xidiga ree France garoonka soo galiyay. Wuxuuna Mourinho yidhi: ” Paul boqolkiiba boqol wanaag muu dareemayn”.
Mar 13,2018:Mourinho ayaa markale kaydka dhigay Pogba kulankii lugtii labaad ee wareegii 16ka kooxood ee Champions League ee Old Trafford ka dhacay laakiin Sevilla ayaa si layaableh Man United uga reebtay UCl wuxuuna ka hor Mourinho sheegay: “Waxaanu haysanaa doorashooyin kala duwan, waxaanu aaminsanahay in tayada Fellaini ay naga dhigayso kuwo ka sii xoogan” balse taasi may dhicin.
Mar 30,2018: Mourinho ayaa markan isaga oo ka cadhaysan su’aalaha Pogba ee ku batay iyo qaab ciyaareedkiisa waxa uu saxaafada ku celiyay: ” Isaga waydiiyay waxa uu ka fikirayo, qaab ciyaareedkiisa wax saamayn ah kuma laha dhaawiciisii”. Wuxuuna markan cadeeyay in Pogba aanu dhaawicii soo gaadhay xaaladiisa xumayn.
Apr 6,2018:Tababaraha Man City ee Pep Guardiola ayaa babmo ku kala dhex tuuray wakiilka Pogba ee Mino Raiola iyo Man United kadib markii uu shaaca ka qaaday in kooxdiisa bishii January loo soo bandhigay saxiixa xidigan wuxuuna ka hor kulankii Manchester Derby uu yidhi: “Laba bilood ka hor isagu (Mino Raiola) waxa uu ii soo bandhigay in Pogba uu noo ciyaaro”.
April 16,2018: Ugu danbayn Paul Pogba ayaa loo sheegay in uu ka bixi karo Manchester United maadaama oo uu Mourinho ka dhamaaday dulqaadkii uu u hayahay xiidga ree France taas oo keeni doonta in suuqa soo socda ee xagaaga uu Old Trafford ka bixi doono.